Mitaky ny “Fanatsaharana Ny Fankahalana Ary Hampanjaka Ny Fitiavana” Ny Diabem-Pireharehana Ao Manila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2016 15:51 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, 日本語, English
Ny teny ‘LGBTindig’ dia manondro ny LGBT mijoro ho amin'ny zon'izy ireo. Mitaky ny fanatsaharana ny fanavakavahana ihany koa izy. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Filankevitry ny Mpianatra Oniversiteran'ny Philippine Manila; nahazoan-dalana.
Nitarika ny fankalazana ny faha-22n'ny Diabem-Pireharehana ireo mpikambana, fianakaviana sy mpanohana ny fiarahamonina LGBT Filipiana mba hankalaza ny fitiavana, ny fandeferana, sy ny zon'olombelona. Notontosaina tamin'ny taona 1994 ny Diabem-Pireharehana voalohany tao Filipina .
Nandrisika ny tsirairay mba hanaparitaka fitiavana eo amin'ny fiarahamonina ny lohahevitra amin'ny Diabem-Pireharehana amin'ity taona ity:
Amin'ity taona ity, mila ny rehetra izahay mba hiaraka hoavy sy hampandroso ny fampielezankevitra ho an'ny fitiavana. Miantso ny Filipiana rehetra izahay mba hamela ny fitiavana hiditra ao an-tranony, ho ao amin'ny fiarahamonina, sy ny firenena iray manontolo.
Mila isika hoavy ahafahan'ny LGBTQIA+ mampiaina amin'ny mahaizy ny tenan'izy ireo sy mitia tsy misy tahotra fanenjehana. Ho fanatanterahana izany, mila manatsahatra ny fankahalana sy hamela hampanjaka ny fitiavana ny olona rehetra na ao anatiny na eo ivelan'ny fiarahamonina LGBTQIA+.
Ny LGBTQIA + fanafohezan-teny dia ahitana olona hita ho vavy tia vavy, lahy tia lahy, sady lahy no vavy, nanova fananahana ary ireo tsy lahy tia vavy na vavy tia lahy, tsy lahy tsy vavy sy ny maro hafa.
Notontosaina andro vitsivitsy talohan'ny fametrahana ho amin'ny toerany ny filoha vaovao ao amin'ny firenena ny hetsika – hetsika ara-potoana, satria nihantsy ny governemanta vaovao ireo vondrona sasany mba hanohana ny fankatoavana ny ny lalàna manohitra ny fanavakavahana. Na dia teo aza ny fanambaran'ireo mpitarika ny firenena fa fiarahamonina malalaka sy demaokratika i Filipina maro an'isa Katolika, mbola misy hatrany ny fitsarana an-tendrony mihatra amin'ny LGBT.
Mitohy hatrany ny famonoana nateraky ny fankahalàna, kanefa tsy mba taterina ny ankamaroan'ny zava-nitranga. Iray amin'ireo tranga malaza vao haingana ny raharaha naha-voarohirohy tatsambo Amerikana iray voampanga ho namono olona nanova taovam-pananahana. Nanoratra momba ny daroka sy vono nihatra tamin'ny vondrom-piarahamonina LGBT i Ivanka Custodio, mpitarika ny vondrom-piarahamonina LGBT, mitanisa ny raharaha goavana tahaka ny Olongapo (toerana namonoana ilay olona nanova taovam-pananahana) sy Orlando (toerana nisian'ny fitifirana faobe nahafaty olona LGBT 50):
Zara raha sitrana tamin'ny fahatairana sy ny alahelo nateraky ny fitifirana tao Orlando izay nahafaty olona LGBT tsy fotsy hoditra isika. 50 no maty tamin'izany andro izany. Saingy manambara fotsiny ny fiainan'ireo LGBT an-tapitrisany maro hafa izay efa maty noho ny fankahalana sy ny herisetra izy ireo. Fiainana niainana tao anatin'ny tolona goavana ho amin'ny fahavelomana indray ary nampiatoan'ny fitifirana nony farany, na rendrika tao an-kabone, na nitriatra ary nasisika tany anaty entana. Amin'ny dingana fanorenana fiarahamonina, nahita izahay fa misy olona toa antsika heverina fa zava-dehibe kokoa ny fiainany noho ny hafa ary noraisina ho tahaka izany.
Sary tamin'ny Diabem-Pireharehana 2016 tao Manila mampiseho ny olona ao amin'ny fiarahamonina LGBT:
Mpianatry ny Oniversiten'i Filipina manatevin-daharana ny Diabem-pireharehana. Loharanon-tsary: Facebook
Notontosaina teo anoloan'ny sarivongan'i Lapu-Lapu, olom-pirenena mahery fo nitolona tamin'ny mpanjanaka Espaniola ny fandaharana lehibe indrindra:
#LetLoveIn (Hampanjakao ny fitiavana)
Mahavariana fa nanatevin-daharana ny hetsika ihany koa ny vondrona ara-pivavahana ary niala-tsiny noho ny tsy fahateren-tsain'ireo vondrona ara-pivavahana sasany:
Miala tsiny aho raha nitsara anao.
Nandray anjara tamin'ny diabe ihany koa ny mpiasan'ny masoivoho Aostraliana:
Manatevin-daharana ny masoivoho Aostraliana
Farany, amin'ny hetsika mampiditra ny rehetra, nomena voninahitra sy nankasitrahana ho anisan'ny vondrom-piarahamonina ireo olom-pirenena pelaka zokiny – izay maro tamin'izy ireo no niaina mangina hatrany tao anatin'ny fanafenana ny fironana ara-pananahan'izy ireo:
Fantaro ireo Pelaka Golden tamin'ny taona ity.